ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆကျဆံဖို့ Pregabalin အမှုန့် | AASraw အမှုန့်
/ဘ‌‌လော့ခ်/Pregabalin/သင်က Pregabalin အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို
အပေါ် Posted 03 / 03 / 2020 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Pregabalin.
Pregabalin (148553-50-8) သည်ကမ္ဘာ့ဒေသများရှိ Lyrica အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်အများဆုံးရောင်းချလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆေးယဉ်ပါးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဆေးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းသို့ ဦး တည်စေသော ဦး နှောက်သွေးကြောများကိုနှေးကွေးစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pregabalin ခန္ဓာကိုယ်အာရုံကြောစနစ်အနှံ့နာကျင်မှုအချက်ပြပေးပို့သော ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းများထိခိုက်သည်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကျောရိုးဒဏ်ရာဝေဒနာများဖြစ်သည့်နဗ်ကြောရောဂါများကဲ့သို့သောရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါများကိုကုသရန်ဆေးပညာလောကတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
Pregabalin (148553-50-8) အနည်းဆုံး (၄) နှစ်အရွယ်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်စတင်ဖြစ်ပွားသောဖမ်းဆီးခြင်းများကိုကုသရန်အခြားဆေးများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဆေးသည်ဆေးလောကတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ drug မှပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်ဆရာ ၀ န်ဆေးညွှန်းဖြင့်သာသောက်သုံးသင့်သည်။ သို့သော်၊ Pregabalin ကိုသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှရယူပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, Pregabalin ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုခဲ့ပြီး;
ဤတွင်ဤနေရာတွင်ကန ဦး Pregabalin သောက်သုံးမှုသည်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်သင့်သော ၁၆၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးညနေစာစားပြီးနောက်သင်သောက်ရန်အကြံပြုသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့်သောက်သုံးသောပမာဏကို ၃၃၀ မီလီဂရမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသောဆေးများသောက်ပြီးနောက်နှင့်သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သည်သောက်သုံးသောပမာဏကိုတစ်နေ့လျှင် ၆၆၀mgs အထိမြှင့်နိုင်သည်။ သောက်သုံးသောဆေးများကိုပြောင်းလဲသောအခါနံနက်တစ်ချက်ကိုချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ထို့နောက်ညနေစာစားပြီးနောက်ဆေးသောက်ပါ။
ဤတွင်ကန ဦး ထိုးသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်သောက်သော ၇၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးပထမဆေးသောက်ချိန်၏တစ်ပတ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင် ၁၅၀ မီလီဂရမ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်ရန် ၂၂၂ မီလီဂရမ်အထိထပ်မံသောက်သုံးနိုင်သည်။ fibromyalgia အတွက်အများဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏသည် 75mgs နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသောက်သုံးသောပမာဏသည် 150mg မှ 225mg အထိဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလေ့လာမှုများအရတစ်နေ့လျှင် 450mgs သောက်ခြင်းသည် Pregabalin အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုမခံစားရသော်လည်းပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများကပြသခဲ့သည်။
ပထမရက်အနည်းငယ်သောက်သုံးခြင်းကသင့်ဆရာဝန်အားသင်၏တိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ လေ့လာမှုများအရသင်သောက်သုံးသောပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်များကိုမျှော်လင့်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Pregabalin သည်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်သောဆေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သောက်သုံးသောအစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းနာကျင်မှုသက်သာစေရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ဆေးသောက်ပြီးနောက်ပထမပတ်အတွင်းတိုးတက်မှုမတွေ့ရပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်သောက်ဆေးကိုချိန်ညှိရန်သင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မတူကွဲပြားသည်၊ ရလဒ်များကိုအခြားသူများလိုအမြန်ရရန်အလိုအလျောက်မဟုတ်ပါ။ သင်ဆေးဝါးသောက်နေသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ရလဒ်မှာကွဲပြားလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အချို့ Pregabalin ရလဒ်များကို ပါဝင်သည်;
အရည်အသွေးပြည့်မီသော Pregabalin ရလဒ်များအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်မှာသင့်ဆရာဝန်ကိုသောက်သုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၌ပါဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ Pregabalin သောက်သုံးမှုကိုသင်၏ဆေးကိုအကြောင်းကြားခြင်းမပြုဘဲမပြုပြင်ပါနှင့်။ သငျသညျမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုးမှအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သလောက်ဆေးစစ်ရန်မလိုဘဲမသောက်ပါနှင့်။ ဤဆေးသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာများကိုသက်သာစေသည်။ အားကစားသမားအချို့သည်ကြွက်သားများနာခြင်းနှင့်ကျောရိုးဒဏ်ရာများကိုထိန်းချုပ်ရန် Pregabalin ကို အသုံးပြု၍ လေ့ကျင့်ခန်းများခြင်းနှင့်ပြိုင်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ဤသည်တက်ကြွစွာနဲ့အစာရှောင်သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါသည် Pregabalin ဝက်ဘဝ6နာရီ။ ထို့ကြောင့်, ပိုကောင်း Pregabalin ရလဒ်များကိုအဘို့, ဆေးညွှန်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတစ်နေ့လျှင်သုံးခွဲခြားရပါမည်။ သငျသညျအကြိုးရလဒျရဖို့အတှကျကတိုတောင်းတဲ့ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်ကတည်းကတစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်း, ကလွယ်ကူစေသည်။ အမြဲတမ်းသင့်ဆရာဝန်ကပေးတဲ့သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်ကပ်ဖို့သတိရပါ။ သငျသညျနိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးသောက်သုံးသောယူရင်တောင်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထက်ဝက်-ဘဝတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။
ယနေ့စျေးကွက်ရှိအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနည်းတူ Pregabalin သည်သင်အလွန်အကျွံသောက်သုံးပါကသင့်အားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၏အများစု Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအဆိုးဓာတ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တခါတရံ၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ထို့နောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်သင်၏ဆေးဝါးအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်ရဲ့အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ အသုံးအများဆုံး Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာပါဝင်သည်;
သတင်းကောင်းမှာအထက်ဖော်ပြပါအဆင့်မြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်တွေ့ကြုံရချိန်တွင်အချို့သောအခြေအနေများသည်သင်၏ဆရာဝန်အားအကြောင်းကြားပါက Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသင်၏ဆေးကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲဆေးညွှန်းကိုဆက်မသောက်ပါ။ အခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်သို့မဟုတ်သင့်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ၊ ပိုမိုစိတ်ချရသောဆေးကိုသောက်ပါကသင့်ဆရာဝန်ကသောက်သုံးသောဆေးကိုရပ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် Pregabalin အမှုန့်ကိုဝယ် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တရား ၀ င်ဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အနီးဆုံးဆေးဆိုင်များမှသင့်သောက်သုံးသောသံသရာအတွက်အမြောက်အများသို့မဟုတ်လုံလောက်သည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကသင့်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတာပြဖို့သင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာသည်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးကို ၀ ယ်ယူသုံးစွဲရန်လွယ်ကူစေသည်။
Pregabalin ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးသောက်ပြီးနောက်ရရှိသောရလဒ်များကိုကျေနပ်အားရသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ Pregabalin ကိုနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသောဆေးအဖြစ်ပုံမှန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူအများစုထံမှအကောင်းမြင်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသီတွေကလည်းမတူကွဲပြားတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် FDDA က Epilepsy, Post-herpetic neuralgia ဒါမှမဟုတ်နာကျင်ခြင်း၊ Diibretic neuropathy နာကျင်မှုနဲ့ Fibromyalgia တို့မှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုကုသရာမှာ FDA ကခွင့်ပြုတာပါ။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်, ယနေ့, သင်လုပ်နိုင်သည် Pregabalin ကိုဝယ်ကြလော့ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သုံးစွဲသူများအတွက်လွယ်ကူသောကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့နောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားရန်မှာလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်သင့်လက်တော့ပ်များမှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။ ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကာလအတွင်းဆောင်ရွက်သည်။ Pregabalin ကိုအမြောက်အများ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသတွင်းရှိ Pregabalin ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုမထိခိုက်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အရည်အသွေးရှိသောဆေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမစတင်မှီသူတို့သည်ဆေးစစ်ရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုအမြဲတမ်းအကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များသည်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသည့်အခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ ရောင်းရန် Pregabalin သင့်ရဲ့အနီးဆုံးဆေးဆိုင်မှာကိုလည်းရရှိနိုင်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှရသေချာပါစေ။ အားလုံးကတော့အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဘက်စတိုးဆိုင်များအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။
သို့သော် Pregabalin (148553-50-8) ကိုအမေရိကန်ရှိစိုးရိမ်မှုများကိုကုသရန်အတွက်အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသုံးစွဲသူများသည်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ရန်၎င်းကိုမသင်္ကေတဖြင့်အသုံးပြုသည်ဟူသောသတင်းများရှိသည်။ ဥရောပကဲ့သို့သောအခြားကမ္ဘာ့နေရာများတွင် Pregabalin သည်လူကြီးများအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကိုကုသရာတွင်လက်ခံခဲ့သည်။ Pregabalin သည်စိတ်ကျရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအတည်မပြုနိုင်သောအစီရင်ခံစာများလည်းရှိသည်။ Pregabalin အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (၂၀၁၃) ။ fibromyalgia လူနာများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော amitriptyline, duloxetine, gabapentin သို့မဟုတ် pregabalin လူနာများအကြားလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုသည်။ အဆစ်စောင့်ရှောက်မှု & သုတေသန, 65(11), 1813-1819 ။
Goodman, CW, & Brett, AS (2017) ။ နာကျင်မှုများအတွက် Gabapentin နှင့် pregabalin - စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအကြောင်းပြချက်ဆေးညွှန်းတိုးမြှင့်?? ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 377(5), 411-414 ။
Lam, DM, Choi, SW, Wong, အက်စ်အက်စ်၊ အိုင်းရင်း၊ MG နှင့် Cheung, CW (၂၀၁၅) ။ ကွဲပြားခြားနားသောခွဲစိတ်အမျိုးအစားများအောက်မှာစူးရှသောခွဲစိတ်ကုသမှုနာကျင်မှုအတွက် Pregabalin ၏ထိရောက်မှု: meta-analysis သည်။ ဆေးဝါး, 94(46) ။
Baldwin, DS, Ajel, K. , Masdrakis, VG, Nowak, အမ်, & Rafiq, R. (2013) ။ ယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါကုသမှုများအတွက် Pregabalin: update ကို။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါနှင့်ကုသမှု, 9, 883 ။
1856 Views စာ
ဘယ်လို Orlistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သလဲ “ လူငယ်အရင်းအမြစ်” - NAD + & NMN ကိုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်